Lupine ee 3aad Qasriga Cagliostro: Shirqoolkii | Saamayn | Wax soo saar - Madadaalo
Lupine ee 3aad Qasriga Cagliostro: Shirqoolkii | Saamayn | Wax soo saar
Shirqoolkii Lupine ee 3aad Qasriga Cagliostro
Saamaynta Lupine ee 3aad Qasriga Cagliostro
Bal aan eegno Wax-soo-saarka
Ma taageere u tahay Lacagta Heist , oo ay la socoto geeska hindisada ee anime? Ma la yaabanahay Alicia ma qabatay borofisar (Sergio Martinez)? Inta aad sugayso bil kale oo buuxda si aad u qabato Tokyo iyo Palermo ficil ahaan, waxaanu kuu soo qaadanaynaa mid kale oo xamaasad iyo daan-jabin ah oo laga soo bilaabo waagii dahabiga ahaa ee 1970-yadii. Waa in aad la yaabban tahay sababta uu heist ugu jiray dariiqa shaashada filimka ka hor Rio iyo Tokyo la isticmaalay Defcon 2 Markaa borofisarkii aanu jeclayn iyo Berlin waxa ka horeeyay tuug kale oo weyn. Haa, waad saxan tahay. Waxaan ula jeedaa Arsene Lupin, oo sidoo kale loo yaqaanLupine ee 3aad Qasriga Cagliostro .
Maanta waxaan kuu keenaynaa dib u eegista filim kale oo Lupine Franchise ah, Lupine qalcaddii 3aad ee Cagliostro . Filimku wuxuu ku ilaalin doonaa inaad ku dhegganaato shaashadaha TV-ga, adigoo cunaya salool oo dib u soo noolayn doona caruurnimadaada iyo taxanaha qarniga 21aad ee sida weyn loo xuso.
Filimku sidoo kale waa mid gaar ah maadaama uu astaan ​​​​u yahay director-ka ugu horreeya ee Hayao Miyazaki, isla agaasimaha halyeeyga ah ee sii wadi lahaa sameynta filimada sida Deriskayga Totoro, Princess Mononoke, Spirited Away, Howl's Moving Castle iyo qaar kaloo badan.
Markaa annagoon hadal dheerayn, aan isla markiiba u boodno sheekada.
Sidoo kale Akhri:- SUGTAAGA BAXA SHAQADA WUXUU DHAMAADAYAY HADA
Ku noolaanshaha nolol qurux badan marka heistu dhammaato waxay soo koobtay shakhsiyadda Lupin. Isagoo ah horyaal tartan caalami ah, wuxuu waqtigiisa firaaqada ah ku qaatay ka qaybgalka cashada rasmiga ah, barkada ciyaarta, khamaarka khamaarka iyo shukaansiga.
Muuqaalkan anime-ka ah, Arsene Lupine III, oo ah tuuga ugu dhiirran, ugu dhiirran iyo tuuga caanka ah ee adduunka, ayaa si guul leh u soo afjaray heist ka casino Monte Carlo oo kaliya si uu u ogaado in raadintiisu aanay ahayn wax ka badan biilasha been abuurka ah. Lupine ka dib waxay lacagta u raadisaa tiro xun oo ka jirta waddanka yar ee Cagliostro. Isaga oo leh ninka aadka loogu kalsoon yahay, Daisuke Jigen, Lupine waxa uu bilaabay safarka si uu u kashifo siraha bililiqada uu ku guul daraystay kaliya si uu u helo sir qoto dheer oo hoos ku qarsoon.
Filimku wuxuu inta badan u ciyaaraa sidii hal ugaarsi weyn oo hanti ah halkaas oo Lupine uu isku dayo inuu iska ilaaliyo dhammaan caqabadaha jidkiisa ku jira, oo uu ku tuuray Count Cagliostro si uu u kashifo ganacsiga been abuurka ah ee madow ee Cagliostro. Si kastaba ha ahaatee, sheekadu ma diiradda saarayso Lupine ama horumarka baandada si ay u helaan bililiqada; dhab ahaantii waxay ku saabsan tahay dhulka Cagliostro laftiisa.
Jilayaasha waxaa lagu dejiyay aagga filimka horay u sii waday si uu u kashifo dhammaan qarsoodiyadiisa, oo ay ku jiraan taariikhdiisa, xiriirka ay la leedahay adduunka intiisa kale, sida tiradu u leedahay awood badan, iyo tan ugu muhiimsan, xiriirka Lupin ee dalka.
Socdaalkan xiisaha badan ee ficilka iyo kaftan yar, Lupine waxay ogaatay in Clarisse, Princess of Cagliostro, ay ku jirto dhibaato, lagu qasbay guur iyo hawsha badbaadinta iyada ayaa qaadanaysa doorka raadinta ugu weyn, iyo annaga. Lupine ee la jecel yahay waxay ka beddeshaa tuugga oo u beddela antihero.
Caqabadaha aadka u ba'an ee isaga kala kulmay safarkan ayaa ku qasbaya inuu gacanta la galo isbatoore Koichi Zenigata oo uu wakhti dheer ku jiray. Markay kuwan cadawga ah isku arkaan inay ku xayiran yihiin catacombs-ka qasriga Cagliostro, gacmaha ayay isqabsadaan. Waxay ku guulaysteen inay ka baxsadaan dabinada iyo badbaadinta amiiradda, waxayna daaha ka rogaan ganacsiga khatarta ah ee ka dhacaya qalcadda Cagliostro.
Sidoo kale akhri:- MA SUGAYSAA FILIMKA KURSIGA EE 2021?
Tixdani waxay u lulaysay magac kasta oo weyn oo aad malayn karto, laga bilaabo
Filimada Indiana Jones ee Steven Spielberg iyo George Lucas, gaar ahaan filimkii ugu horreeyay ee Raiders of the Lost Ark (1981), ciyaaraha fiidiyowga sida ciyaarta arcade, Cliff Hanger ka ganacsiga muuqaalkiisa. Simpson-yada sidoo kale waxaa saameeyay dhagarta Cagliostro maadaama ay ahayd bilawga habeenkii.
Magaca qalinka ee Daanyeer Punch, Farshaxanistaha Manga-ga Japan Kazuhiko Kat waxa uu bilaabay taxanaha 1965. Waxyigiisa taxanaha waxa uu ahaa tuuggii caanka ahaa ee Faransiiska Maurice Leblanc ee Arsène Lupin. Wuxuu akhriyay 15 ka mid ah sheekooyinka Leblanc ka hor inta uusan bilaabin taxanaha. Hadafka taxanaha Lupine III wuxuu ahaa in la abuuro riwaayad majaajillo ah oo ka tarjumaysa shakhsiyadda Leblanc.
Asal ahaan, wuxuu damcay inuu qariyo xiriirka dhiigga ee ka dhexeeya labada jile ee mala-awaalka ah, laakiin wuxuu ku qanciyay si kale.
Daanyeer Punch waxay horumarisay dabeecadda Lupine III sida saaxiibka taxadar la'aanta isagoo isku daray qaybo ka mid ah Arsène Lupine iyo James Bond. Lupine waxaa la siiyay jaakad casaan ah, kaas oo Daanyeer Punch uu u maleynayo inuu yahay midab soo jiidasho leh.
Aaladaha ku habboon odhaahyo caqli-gal ah iyo sayid-gadis, gabadhu ma jeclayn dabeecad sida Lupin oo kale ah. Si gaar ah ayuu ugu xariifsan yahay siyaabaha uu wax u khiyaaneeyo. Xaqiiqda xiisaha leh ayaa ah in Lupine iyo kormeeraha cadawgiisa zenigata loo qorsheeyay inay noqdaan Tom iyo Jerry bini'aadam oo u dhigma Manga asalka ah.
Waa daba-gal aan dhammaad lahayn, laakiin haddii ay ku dhammaatay Lupine iyo Zenigata oo ku yimid si siman, waxay ka dhigi doontaa aragtida Miyazaki run.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo basbaaska ku saabsan taxanaha iyo filimada aad jeceshahay, kaliya eeg our website , waan hubaa inaadan niyad jabi doonin.
Waa maxay macnaha DNI ee Tiktok?
Ku guuleystayaashii hore ee King George VI Chase
waa server netflix hoos u dhacay
daawo online filim buuxa oo bilaash ah
sideen ugu rakibi karaa chromecast kombiyuutarkayga
halkee baan ka daawan karaa online
iibso kaararka hadiyadaha amazon ee raqiiska ah